Ahoana no nahatonga an'i Ocho Rios, Jamaika ho fahagagana Krismasy manavotra aina ho an'ny tantsambo roa avy any Costa Rica?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ahoana no nahatonga an'i Ocho Rios, Jamaika ho fahagagana Krismasy manavotra aina ho an'ny tantsambo roa avy any Costa Rica?
Desambra 24, 2018
Ny fiverenan'ny Emperora an'ny Ranomasina Karaiba avy any Kiobà ka hatrany Ocho Rios, dia midika ho fahagagana Krismasy mamonjy aina ho an'ny tantsambo roa i Jamaika.
Ireo tantsambo roa dia tafahitsoka tao anaty sambony nandritra ny efa ho 3 herinandro. Sivily izy ireo ary tsy nisy lasantsy, ambany rano madio, ary tafavoaka velona tamin'ny trondro azon'izy ireo azony.
Ny sambo fitsangantsanganana Emperora Royal Caribbean an'ny sambo Seas dia nahita ireo tantsambo roa tafahitsoka tao anaty sambo mpanjono kely ny zoma alina teo anelanelan'ny Grand Cayman sy Jamaica.
Nahita jiro tamin'ny 19.00 ora maraina ny sambo fitsangantsanganana, ary avy eo nampihena ny hafainganana ary nifindra nankany amin'ilay sambo kely. Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia nifandray tamin'ny Grand Cayman sy ny mpamonjy voina Jamaika, saingy nilaza izy ireo fa tsy afaka manome fanampiana.
Adiny telo taty aoriana dia nampidina sambo kely kely antsoina hoe tender ny sambo fitsangantsanganana ary soa aman-tsara no nahazoany ireo tantsambo roa. Nomena rano sy fitsaboana izy ireo teo amin'ny sambo fitsangantsanganana roa.
Avy tany Costa Rica no niaingany ireo mpanjono roa tamin'ny voalohany. Rehefa natory nandritra ny alina izy ireo, dia nihataka lavitra ny fitaovany mpanjono ny sambon'izy ireo noho ny toetr'andro ratsy. Lany ny solika saika hiverina.
Nilaza tamin'ireo mpiasan'ny sambo fitsangantsanganana ireo mpanjono fa fito andro fotsiny no ananany sakafo sy rano. Ny rano no olana voalohany, ary nanandrana nanjono sakafo izy ireo.
Nentina nidina ny sambo tany Ocho Rios, Jamaika ireo tantsambo mba hotsaboina. Ny ekipan'ilay sambo fitsangantsanganana dia nanome azy ireo $ 300 hividianana akanjo sy sakafo rehefa nivoaka ny hopitaly izy ireo.
Fantatry ny mpizahatany any Barcelona: Fanairana fampitahorana navoakan'ny manampahefana amerikana
Christmas Town USA: olom-pirenena 651 ary seho maivana indrindra any Amerika
Nahazo tombony 25% amin'ny Discovery Jets ny National Airways Corporation
Ny US Travel dia manohana an'i Nicole Porter hanamafisana ny fanentanana ara-politika